News - Waxqabadka iyo mabda'a shaqada ee birta saddex geesood leh ee birta adag balastarka adag
Madax Qalab Bir ah
Waxqabadka iyo mabda'a shaqada ee birta seddexaad ee birta adag ee balastarka adag
Mabda'a shaqada ee biraha seddexaad ee biraha adag ee balastarka adag:
Loogu talagalay seddex meelood oo bir ah oo lagu xirayo biraha, marka lagu daro labada eccentricity ee qalabka waalka iyo saxanka waalka, dusha sare ee xirmidda saxanka waalka iyo kursiga waalka ayaa qaab u ah koorta gogol xaarka ah (kani waa tan saddexaad ee waxa loogu yeero seddexaad eccentricity). Marka waalka la xidho, saxanka waalka ayaa horay loo riixayaa iyadoo ay sabab u tahay cilladdu. Ma jiro wax khilaaf ah oo u dhexeeya saxanka waalka iyo kursiga waalka inta lagu gudajiro nidaamka xiritaanka. Taarikada waalka ayaa si toos ah loogu dhejiyaa kursiga waalka, sidaas awgeedna loo hubiyo nolosha adeegga waalka; waxaa sii dheer, dariiqan dartiis Giraanta wax lagu xiro (ha ahaato mid ku rakiban kursiga waalka ama saxanka waalka) wuxuu leeyahay heer dabacsanaan ah, oo waxaa jira qadar yar oo nadiifin ah oo u dhexeeya madaxa iyo giraanta laastikada ee giraanta laastikada si loo sameeyo giraanta laastikada oo waxyar barokacday; marka waalka la xiro, waxaa saameeya Awooda xiritaanka, giraanta daboolka elastomer wuxuu si otomaatig ah ugu dhaqaaqi karaa meesha uu xooggu ugu labisan yahay; oo ay weheliso qadar yar oo isbeddel ah ee giraanta laastikada, giraanta wax lagu xidho ee kursiga waalka ayaa si siman loo adkeeyay si loo gaadho gobolka ugu fiican ee wax lagu xidho.
2. Isbedelada waxqabadka ee filtarka balanbaalisyada leh qaabdhismeedyo kala duwan:
Markii ay sii kordhaan tirada eccentricity ee saxanka waalka ayaa sii kordhaya, oo dhumucda saxanka waalka ayaa sidoo kale ka sii dhumuc weyn, caabbinta dareeraha maraya saddexda qaybood ee balastarka balanbaalisku wuu sii kordhayaa; iyada oo tirada eccentricity ee waalka balanbaalisku kordho, waxqabadka waalka sidoo kale si weyn ayuu isu beddelaa. Marka la barbardhigo afar wiish oo qaab-dhismeedyo kala duwan leh, waxaa la arki karaa in waalka saddex-eccentric balanbaalku soo saari karo hoos u dhac ballaaran oo cadaadis ah waxaana loo isticmaali karaa inuu yahay waalka nidaaminaya; cadaadiska hoos u dhaca marka dheecaanka uu ku sii qulqulayo waalka uu kordho iyadoo la kordhinayo tirada eccentrics; laakiin marka la barbardhigo kuwa kale Marka la barbardhigo filtarka balanbaalis la'aanta ah, hoos u dhaca cadaadiska ee seddex meelood ee balastarka balanbaalisku wali wuu yar yahay. Maaddaama tirada waxsoosaarka waalka balanbaalku isbeddelayo, waxqabadka xiritaanka kursiga waalka ayaa sidoo kale isbedelaya. Mashiinka seddex-geesoodka ah ee balanbaalisku wuxuu leeyahay waxqabadka xiritaanka kursiga. Markii ay kororto tirada astaamaha, dulliga loo baahan yahay furitaanka iyo xirida waalka ayaa hoos u dhacaya. Sidaa darteed, Xuddunta looga baahan yahay furitaanka iyo xiritaanka waalka balanbaalis saddex-laabka ah ayaa aad uga yar kan noocyada kale ee filtarka balanbaalisku leeyahay. Iyada oo isbeddelka tirada eccentricity, heerkulka iyo heerka fasalka cadaadiska iyo kala duwanaanta heerkulka la adeegsan karo ee baalka balanbaalku sidoo kale yeelan doono isbeddello waaweyn. Heerkulka ku habboon iyo heerka fasalka cadaadiska ee waalka baakadka seddex-geesoodka ah ee loo yaqaan 'balanbaal balanbaal' waa mid aan la mid ahayn noocyada kale ee filtarka balanbaalisku leeyahay.
3. Faa'iidooyinka saddex-waalka balaastikada eccentric:
Waxqabadka goynta wanaagsan Saddexda biibiile ee dahaadhka birta ah ee saddex geesoodka ah waxay isticmaashaa tiknoolaji si loo jaro waalka, markaa waxaa jira waxqabad heer sare ah oo lagu xiro kursiga waalka, sidaas darteed waxaa loogu yeeraa waalka eber-daadashada. Qaybaha adag ama wasakhda dhex-dhexaadku wax saamayn ah oo muuqata kuma laha wax-qabadka deminta saddexda weel ee balastarka balastarka ah ee birta ah, maxaa yeelay marka waalka u dhow yahay inuu xirmo, heerka socodka dhexdhexaadku aad buu u sarreeyaa, sidaa darteed wasakhda kuma ururi karo kursiga waalka.
Nortech waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee soo saaraha waalka warshadaha ee Shiinaha leh shahaadada tayada leh ee ISO9001.
Waxyaabaha waaweyn: Balanbaalis Madax, Ball Madax,Albaabka Waalka, Hubi Madax, Globe Vavlve,Y-Cadaadiyayaal, Qalabka Korontada , Neefsashada Neefta.
Waqtiga boostada: Jul-23-2021